Barcelona oo kabaha la dul mari doonta Man United & Dagaalkii ka dhaxeeyey oo cirka galay, Hajbaado culus oo la isku diray Iyo Man United “Waan dhaawici karnaa kooxda….. – Puntlandtimes
Barcelona oo kabaha la dul mari doonta Man United & Dagaalkii ka dhaxeeyey oo cirka galay, Hajbaado culus oo la isku diray Iyo Man United “Waan dhaawici karnaa kooxda…..
NAIROBI(P-TIMES)- Xili weli xiisada u dhaxaysa kooxaha Man United iyo Barcelona ay isku sii shareerayso iskana hor imaanayaa ayaa waxaa arimahaasi ka hadlay difaaca kooxda Manchester United ee Chris Smalling oo sheegay in Red Devils ay diyaar u tahay inay ku wajahdo Barcelona tartanka Champions League.
Dhinca kale Chris Smalling ayaa tilmaamay in kooxdiisa Manchester United ay dhaawici karto Barcelona.
Isku aadka wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League ayaa maanta la sameeyay, waxaa kasoo baxay kulamo aad u xiiso badan, sida kulanka dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Manchester United.
Chris Smalling ayaa kadib isku aadka la sameeyay wuxuu ka hadlay aragtidiisa kaga aadan kulanka ay la ciyaarayaan kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“5 ama 6-dii isbuuc ee ugu dambeysay, marka loo fiiriyo guulihii aan ka gaarnay kooxaha Chelsea, Tottenham ama PSG, waan ognahay sida aan u dhaawici karno kooxda naga soo hor jeeda ee Barcelona”.
Dhinace kale wargayska MARCA ayaa soo saaray warbixin uu ku eegayo 5 sababood oo ay Barcelona u tahay kooxda ugu cad cad ku guulaysiga Champions League, waxaana qodobadaasi ay u dhignaayeen sidatan:-
Xiddiga reer Argentine ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah xilli ciyaareedkan waxana uu si aad ah u doonayaa in uu ugu dambayn ku guulaysto tartanka oo uu ku fashilmay in uu kor u qaado tan ilaa 2015.
Lionel Messi ayaa ah gool dhaliyaha tartanka isaga oo dhaliyay 8 gool hadii uu sii wado qaab ciyaareedka fiicana waxa uu Barcelona ku hogaamin karaa hanashada tartanka.
Kadib guushii Lyon ay kaga gaadhay Camp Nou, Barcelona ayaa gaadhay kulankii 30-aad ee guuldaro la,aanta ee tartanka champions League ee garoonkeeda Camp Nou.
Barcelona ayaa gaadhay 27 guulood iyo 3 bar-baro iyaga oo dhaafay rikoodhkii Bayern Munich ee 29 guuldaro la,aaan ee garoonkeeda.
3.Goolhayaha Ugu Fiican Tartanka:
Kadib bixitaankii Manuel Neuer kadib guuldaradii Liverpool iyo bixitaankii Atletico Madrid goolhayaha Barcelona ee Marc-André ter Stegen ayaa ah goolhayaha ugu fiican ee tartanka ku hadhay.
Goolhayaha reer Germany ayaa ah goolhayaha ugu fiican ee tartanka champions League isaga oo waliba farqi weyn ka horeeya goolhayayaasha kale sidaas darteed waxa uu ku leeyahay door weyn ku guulaysiga Barca ee tartanka.
Barcelona ayaa xilli ciyaareedkan haysata xiddigo cajiib ah kuwaas oo uu Ernesto Valverde isticmaalay 15 xiddig ama wax ka badan shaxdiisa xilli ciyaareedkan.
Daafaca reer Spain ayaa qaadanaya xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan isaga oo dhaliyay goolal badan oo ah 7 gool xilli ciyaareedkan.
Qaab ciyaareedka Pique ayaa door weyn ka ah qaab ciyaareedka kooxda Barcelona waxana uu door weyn ka qaadan karaa ku guulaysiga Barcelona ee tartanka.
Xiddiga reer Brazil ayaa ugu dambayn taageerayasha Barcelona ilowsiiyay xiddigoodii hore ee Xavi isaga oo ku jira qaab ciyaareed fiican.
Da yarkan ayaa ku jira qaab ciyaareed fiican isaga oo kulankii Lyon dhiibay baasaska ugu badan ee kooxdiisa ee xilli ciyaareedkan.
7.Fursad Dahabi Ah:
Marka loo eego in ay Barcelona kaliya gaadhay 8 dhamaadka hadana Barcelona ayaa haysata fursad dahabi ah marka loo eego in ay tartanka ka hadheen kooxo waaweyn oo u sharaxnaa tartanka.